सुत्ने पोजिसनबाटै थाहा हुन्छ स्वभाव, पढ़नुहोस – Jaljala Online
Posted on July 24, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
राति ओच्छ्यानमा तपाईं कसरी सुत्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईंको व्यक्तित्वको रहस्य खोलिदिन्छ ।
स्कटल्यान्डको एडिनबरामा रहेको स्लीप सेन्टरका निर्देशक क्रिस इडजीकोव्स्कीका अनुसार तपाईंले सुत्ने तरिकाले तपाईंको व्यक्तित्वका बारेमा बताउँछ ।
तपाईँको कम उमेरमै कपाल फुल्यो ? यो उपाय उपाय अपनाउनु उत्तम
बुढ्यौली लाग्दै गएपछि कपाल फुल्नु सामान्य हो तर आजकल धेरै मानिसलाई सानै उमेरमा कपाल सेतो हुने समस्याले सताउँछ ।
पोषणविद्का अनुसार, शरीरमा आवश्यक भिटामिन र खनिजको कमीका कारण वा उमेर बढ्दै जाँदा एक विशेष पिग्मेन्टमा कमी आउँछ र कपाल फुल्न थाल्छ । यो पिग्मेन्ट के हो र यो किन कम हुन्छ ? थाहा पाऔँ
कपालको जरामा भएका कोशिकाहरूमा भएका मेलेनिन नामक पिग्मेन्टमा कमी आएपछि कपाल सेतो हुन थाल्छ । मेलेनिनले कपाललाई कालो राख्छ । वातावरण प्रदूषण तथा तनावका कारणले मेलेनिन घट्छ ।
कपाल कालो बनाउनुछ भने सातवटा करी पात सर्स्युँको तेलमा हालेर तताउनुस् । अनि अलिक सेलाएपछि त्यो तेलले टाउको मालिश गर्नुस् ।
बराबर मात्रामा भृंगराज र अश्वगन्धाको धूलो नरिवलको तेलमा मिसाउनुस् । राति सुत्नुभन्दा दश मिनेटअगाडि यसले टाउकोमा मालिश गर्नुस् । यो उपाय एक हप्तासम्म प्रयोग गर्नुस् ।
कपालको जरामा गाईको घिउ हप्ताको तीनचोटि दल्नुस् । घिउ दलेको १५ मिनेटपछि श्याम्पू लगाउनुस् । कपाल छिट्टै कालो हुन थाल्छ ।
जैतूनको तेल हल्का तताउनुस् अनि त्यसमा कपूर हालेर कपालको मालिश गर्नुस् । पन्ध्र मिनेटपछि श्याम्पू दल्नुस् ।
आधी कचौरा दहीमा एक चम्चा नून र मरिचको धूलो हालेर कपाल मालिश गर्नुस् । पन्ध्र मिनेटपछि श्याम्पू लगाउनुस् ।
कागतीको रसमा अमलाको धूलो हालेर कपालको जरामा मालिश गर्नुस् । पन्ध्र मिनेटपछि श्याम्पू गर्नुस् । हप्तामा दुईचोट यसो गर्नुस् ।
जीवन र मृत्युमा कसैको नियन्त्रण हुँदैन । कसैलाई पनि आफ्नो मृत्यु कहिले हुन्छ थाहै हुँदैन । यहाँ हामी मृत्युसँग जोडिएका केही कुरा बताउँदैछौं ।
मृत्युपछि हाम्रो शरीरको अंग एक एक गरी काम गर्न छोड्छ । सुन्ने क्षमता चाहिँ सबभन्दा पछि सकिन्छ । मृत्युको केही क्षणपछि हाम्रो दिमागका केही भाग सक्रिय रहन्छन् ।
एक अध्ययन अनुसार दाहिने हात चलाउनेहरू देब्रे हात चलाउनेको तुलनामा तीन वर्ष बढी बाँच्छन् ।
अमेरिकाको न्यु योर्कमा हत्याभन्दा बढी आत्महत्या हुन्छन् । अमेरिकामा हरेक घन्टा एक व्यक्तिको मृत्यु रक्सी पिएर गाडी चलाएका कारण हुन्छ ।
आँकडाअनुसार प्रत्येक वर्ष शार्कको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्याभन्दा टाउकोमा नरिवल खसेर मृत्यु हुनेको संख्या बढी हुन्छ ।
हरेक दिन एक लाख ५३ हजार व्यक्तिको कुनै न कुनै कारणले मृत्यु हुन्छ । नवजात शिशुको शरीरमा २७० वटा हड्डी हुन्छन् तर वृद्ध भएर मर्ने बेलामा जम्मा २०६ वटा हड्डी बाँकी रहन्छन् ।
हाम्रो दिमागको कोशिकाले तीन मिनेटसम्म अक्सिजन पाएनन् भने हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ । मृत्यु भएको दुईदेखि ६ घन्टासम्ममा पूरा शरीर अररो हुन्छ ।
साङ्लोको टाउको काटिदिनुभयो भने पनि ऊ नौ दिनसम्म बाँच्छ । हरेक ४० सेकेन्डमा संसारभरि कोही न कोहीले आत्महत्या गरेको हुन्छ ।
हरेक ९० सेकेन्डमा बच्चा जन्माउँदा कुनै आमाको मृत्यु भएको हुन्छ । भारतमा हरेक घन्टामा एक महिलाको दाइजोका कारण मृत्यु भइरहेको हुन्छ ।
चिकित्साविज्ञानले खुबै प्रगति गरेको भएपनि प्रत्येक वर्ष उपचारको कमीका कारण चार लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
तपाईंलाई निद्रासम्बन्धी रोग छ भने पनि बर्बराउनुहुन्छ । चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुस् । नडराउनुस्, यो कुनै रोग हैन । तर दिनदिनै निद्रामा बर्बराउन थालनुभयो भने चाहिँ मनोविज्ञानवेत्तासँग सम्पर्क गर्नुस् ।
सरल तरिकाले विकास दिसा गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै कब्जियत हो ।
दिनमा एकपटक पनि सजिलोसँग दिसा गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने पनि कब्जियत भन्ने बुझ्नुपर्दछ । कब्जियत लामो समय रहिरह्यो भने विभिन्न साइड इफेक्टहरु रहन सक्छन् ।
राती सुत्नुअघि तातो दुधमा एक चम्चा घ्यू हालेर पिउन सकिन्छ । दुधमा चीनीको साटो मह वा मिश्री प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ । राती यो उपाय अपनाउँदा बिहान मज्जाले पेट सफा हुन्छ ।
तुरुन्त पेट सफा गर्न कागती पानीले पनि सहयोग पुर्याउँछ । एक गिलास मनतातो पानीमा एउटा कागती निचोरेर राती सुत्नुपूर्व पिउँदा बिहान तपाईंको पेट हल्का हुन सक्छ ।
आज २०७६ भदौ ३० गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – मित्र सुख । समयको ख्याल नगर्दा पुराना तथा नयाँ कामहरु थाति रहनेछन् […]
जो निद्रामा घरसँगै बगे…